Ntuchi Mgbakwunye Tube Copper na RF RF
Home / ngwa / Ntuchi Mgbakwunye / Itinye n'ọkwa Annealing Ọla kọpa tube
Category: Ntuchi Mgbakwunye Tags: tubes ọla kọpa, ọla nchara annealing abanye, ọla nchara annealing, ọla kọpa annealing, ọla kọpa banyere induction annealing, ọla kọpa, ọla kọpa annealing, ọla kọpa annealing usoro, nnukwu eriri ọla kọpa, batrị ịbanye na batrị ọla kọpa, etiti oge ana-adọpụ ụdọ ọla kọpa
Ntuchi Na-eme Ka Akpụkpọ Ọkụ Ekoro Ejikọta na Ngwá Agha Ngwá Agha Na-agba Ọkụ Dị Elu
Ebumnuche Iji kpoo ngwụcha abụọ nke tube ọla kọpa iji mee ka ọ dị nro dị ka o kwere mee 1.5 "(38.1mm) site na njedebe ma jigide ike zuru oke n'akụkụ anneal
Ihe 1.625 "(41.275mm) dia x 24" (609.6mm) ogologo tube tube
Okpomọkụ 1500 ºF (815.5 ºC)
60 kHz ugboro ugboro
Akụrụngwa • DW-HF-45kW sistemụ kpo oku, nke nwere isi ọrụ dịpụrụ adịpụ nwere ihe asatọ 1.0 containingF maka ngụkọta nke 8.0 μF
Usoro A na-eji eriri igwe ntụgharị anọ na-atụgharị anya maka usoro mgbakwunye a. A na-etinye tube ọla kọpa na eriri igwe na ike a na-etinye maka ngụkọta nke 7.5 sekọnd. Na 3.75 sekọnd ọla kọpa tube na-agba gburugburu ọkara a uzo amụma mkpuchi edo annealing. The ọla kọpa na-tube ozugbo quenched na-ekwe nkwa na annealed ebe bụ naanị
1.5 ”(38.1mm) site na njedebe nke ọkpọkọ. A na-atụnye ọkpọkọ ahụ iji gbakwunye na nsọtụ nke ọzọ.
• Nchịkwa ngwa nke okpomọkụ na mpaghara kpọmkwem
• Ogologo usoro oge, imepụta mmepụta
• Ọdịdị dị elu, ụgwọ dị ala
Ntuchi Mgbakwunye Ogwe ígwè na tube
Ntuchi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpuchi